Last nohavaozina: Mey. 21 2019 | 3 min namaky
Toy izany na tsia, ny fomba mandia ny fiainana hoy ny zavatra maro mikasika ireo lafiny samihafa amin 'ny toetra. Ohatra, olona iray izay nitandrina ao amin'ny toeram-piasana dia tokony hanana fomba fijery henjana kely kokoa mankany amin'ny fiainana amin'ny propensity ho lavorary. Etsy ankilany, ianao dia afaka ny ho antoka fa ny mpiara-miasa, izay tonga tao amin'ny birao amin'ny ketchup ny lobaka Sleeve dia azo inoana fa tsy misy olona tena tsara. Mazava ho azy, izany dia tsy tokony ho olona iray barometer ny toetra ankapobeny. Na izany aza, azo antoka izy ireo famantarana ny fomba olona iray mahafantatra amin'ny ankapobeny ny fiainana. Amin'ny fanitarana izany, olona hifidy ho an'ny biby isan-karazany toy ny biby fiompy dia tokony hizara toetra sasany.
Ny vaovao tsara dia alika no tena be fiahiana tompon'ny, mafana fo sy ny nataon'ny. Sady koa anie, alika tokony ho nikarakara. Raha toa ka ny mpiara-miasa dia ny alika olona, misy vintana avo dia avo, izay matetika kokoa fitiavana eo amin'ny fifandraisana. Dog tia koa ho tompon 'andraikitra kokoa ihany noho ny hoe alika rehefa mitaky rehetra ny sain'ny maro ihany koa. Zavatra tsara iray mikasika ny alika tompony dia ny hoe fotoana indrindra, izy ireo no tena azo antoka sy marina ny filokana.
Saka no fantatra fa tena manalavitra manodidina ny olona. Na izany aza, izy ireo ihany koa ny zavaboary, ary tena mora tia tena mitady mafy. Cat tompon'ny mampiseho toetra toy izany koa. Izy ireo tena tia ny biby fiompy sy ny tena tia manao ny afovoan-saina (na dia mety tsy mampiseho izany). Ny fanalahidin 'ny saka niaraka tompony dia amin'ny alalan'ny fanehoana ny mitovy ny saina sy ny maha saro-pady ny fihetseham-po.
Mazava ho azy, misy adihevitra be momba na raha ny marina tsara foana ny vorona toy ny trano biby. Na dia ny olona sasany no mahazo manodidina azy alalan 'ny fanorenana ny vorona cages zaridaina sy manome ny vorona ny fahalalahana mandehandeha tahaka ny mazava ho azy ny manao. Bird tompon'ny miaina ny fiainany indray andro amin'ny fotoana sy ho toy izany, dia matetika mba ho hita ao amin'ny toe-javatra tsy conformist. Ihany koa izy ireo miezaka ny mamorona sy sahisahy kokoa.
Trondro toy ny biby fiompy dia tahaka akaiky animate zavatra tsy toy ny biby dia mety ho. Antoka, mahafinaritra ny mijery ny trondro milomano any amin'ny trondro na vilia baolina tanky. Na izany aza, iray dia tsy tena mahazo be roa-fomba fifandraisana amin'ny hazandrano. Ny olona izay tia mitandrina trondro toy ny biby fiompy ireo mangina matetika noho ny ankamaroan'ny. Na izany aza, izy ireo ihany koa ny tsara kokoa noho ny hafa ny olona, ​​ary amin'ny ankapobeny fa tsy momba ny fiaraha-monina mahazatra fenitra.
Bitro, hamsters sy Guinée kisoa
Ara-dalàna ireo biby tarehy kokoa noho ny ankizy sy ny tanora. Mazava ho azy, misy ihany koa ny olon-dehibe maro izay mitandrina kely, zavaboary toy ny biby fiompy furry. Ireo no olona izay amin'ny ankapobeny no mahazo reciprocal fifandraisana fa dia dodona ny hitsapa ny tany voalohany eo amin'ny ny biby fiompy. Izy ireo ihany koa ny hafanana sy fitiavana amin'ny fironana mankany amin'ny andraikitra. Ireo biby fiompy ireo tia vazivazy mahafinaritra sy feno fitiavana.
Ahoana kosa ny amin'ireo izay tsy manana biby fiompy ao an-trano? Na na dia ireo izay tsy milaza na inona na inona fitiavana ny biby? Tamin'ny toe-javatra, izany antoka tsy midika fa izy ireo dia mangatsiaka fo, na dia tsy eo amin'ny tsena ho an'ny fifandraisana feno fitiavana. Toe-javatra iray manan-danja mitana anjara amin'ny famaritana raha toa ny olona iray ho vonona kokoa noho ny olon-kafa mba manana biby. Tsy manana biby fiompy koa ho tena tsy mivadika, tompon 'andraikitra sy be fiahiana!
Raha tsorina,, Tena mety hitranga izany fa ho tonga manerana ny tompon'ny biby izay tsy manana ny toetra voalaza etsy ambony. Tsy raikitra izany ny lisitry ny toetra araka ny karazana biby iray tia. Na izany aza, ampy no nitarika fikarohana mba hampisehoana fa misy fifanarahana ankapobeny momba ny toetra sy ny toetra tia ny biby tsirairay dia mety hanana. Na inona na inona ny biby fiompy izay foana ao an-trano, ny fifandraisana dia mbola ny isan'ny faritra roa mitovy eo amin'ny olona roa nanao.
Nahoana ianao Na izany aza Single – Handresy izany